I-Akhawunti ye-ECN - Vula i-Akhawunti Engcono Yokuhweba ye-ECN Forex
Abahwebi #1 Ukukhetha
Ukusakazeka kusuka 0.0 Pips Ikhomishini yokuhweba 0 $
Yenza ukukhetha okulungile kokuhweba kwakho kwe-Forex
utshalomali nokuhweba ngezindleko eziphansi futhi
Hamba kusuka ku-Zero kuya ku-Hero
Vula i-MY ECN XL ACCOUNT yami
Bhalisa nge-FACEBOOK BHALISA NE-GOOGLE
Izinzuzo Zakho Zokuhweba Ezengeziwe
Kuze ku-1: 500
I-VPS yamahhala *
Amathuluzi Okuhweba Okuthuthukisiwe
I-Technical Technical yamahhala
Kungani uhlala ngokujwayelekile uma ungaba khona
ukusebenza kahle cha cha imali eyengeziwe?
"I-Akhawunti Ehamba phambili Yokuhweba Forex"
ngabathengisi kanye nemboni yezobuchwepheshe
kuma-UK FOREX Awards 2017
Umklomelo wokuwina, owawuvotelwe ngabathengisi ngokwabo ngokuzimela, kuyisifiso sokuzama imizamo eqhubekayo yeFXCC ekuthuthukiseni nasekutshaleni eminikelweni yayo yokuthengisa ukuze kuzuze amakhasimende ayo.
Ngabathengisi be-akhawunti ye-ECN XL bajabulela ingxube yezinga le-VIP lenkonzo kanye nokuhweba kwezindleko eziphansi. Ngenxa yalesi sizathu, i-Akhawunti ye-FXCC ECN XL yaba abahwebi #1 ukukhetha.
Ukwenziwa Kweqiniso kwe-STP / ECN
Ukuqinisekisa ukuthi wonke ama-oda ayi
wabulawa ngokuncintisana ngempela
Amathuba akho okuhweba kanye nempumelelo engase ibe ngcono ngokuzenzekela ngokusebenzisa ukuqondisa kwethu ngokuqondile ukugcwaliseka kwe-order, ku-ECN (ukuxhumana kwenethiwekhi yezokuxhumana).
Amakhasimende e-FXCC angakwazi ukuhweba forex kweso leso sikhathi, ukusebenzisa ngokunenzuzo ukusakaza bukhoma, amanani angcono kakhulu asebenzayo emakethe, ngokuqinisekiswa okusheshayo. Ayikho ideskini yokusebenzisana ukungenelela, azikho izingcaphuno zokuphinda kabusha.
Kusukela ku-ZERO kuya kuHero ..
Nciphisa izindleko zakho zokuhweba ukuze
zero futhi wandise eyakho
I-ECN XL, eyaziwa nangokuthi i-akhawunti ye-ZERO ingenye yama-akhawunti athengisa kakhulu ama-forex yokuhweba.
Jabulela izinzuzo futhi uqale ukuhweba ngokusabalalisa kusukela kokuphansi njenge-pips ye-0.0, ama-zero, ama-swaps, ama-zero mark up and zero deposit.
Vula i-ECN XL ACCOUNT
Khetha i-Platform efanele
Jabulela izindawo eziningi zokuhweba amapulatifomu atholakalayo ngezinhlelo zokusebenza namadivayisi - i-Windows, iOS ne-Android. Ukwandisa ukuhweba kwakho namathuluzi abalulekile okuhlaziya nokuhleleka.
Zama Platforms zethu ze-Forex Manje
Vula i-akhawunti ye-ECN ye-demo vula i-akhawunti ye-ECN bukhoma
Ukulungele ukukusiza ngaso sonke ukuhweba umuzwa wakho, 24h wezilimi eziningi ikhasimende
ukusekelwa ngabaphathi be-akhawunti abazinikezele.